यस्ता छन् पाठेघरको मुखको क्यान्सबाट बच्ने उपाय - DoroNepal
होमपेज स्वास्थ्य यस्ता छन् पाठेघरको मुखको क्यान्सबाट बच्ने उपाय
यस्ता छन् पाठेघरको मुखको क्यान्सबाट बच्ने उपाय
DoroNepal.com 12:45 PM स्वास्थ्य,
काठमाडौं । पछिल्लो समयमा महिलाहरुमा पाठेघरको मुखको क्यान्सर बढेको चिकित्सकहरुले बताएका छन् । नेपालमा महिलामा बढी देखिने पहिलो क्यान्सरमा पाठेघरको मुखको क्यान्सर बढी देखिएको छ ।
साधारणतया ४० वर्ष नाघेपछि देखिने गरेको पाठेघरको मुखको क्यान्सर पछिल्लो समय कम उमेरमा देखिने गरेको नर्भिक अस्पतालका वरिष्ठ क्यान्सर रोग विशेषज्ञ डा. राजेन्द्र बरालले बताए । “महिलाहरुमा पछिल्लो समय पाठेघरको मुखको क्यान्सर पहिलो नम्बरमा देखिएको छ भने दोस्रो नम्बरमा स्तन क्यान्सर देखिएको छ,” उनले भने “महिनावारी सुरु भएको समयमा पाठेघरको मुखको क्यान्सरविरुद्धको भ्याक्सिन दिएमा यो रोगबाट बचाउन सकिन्छ ।”
यो रोगबाट बच्न कम उमेरमा विवाह नगर्ने, गुप्तांगको सरसफाईमा विशेष ध्यान दिन, धेरै बच्चा नजन्माउन, सूर्तीजन्य पदार्थको सेवन नगर्ने र हरेक एक वर्षमा पाठेघरको (प्याप-स्मेयर) परीक्षण गराएमा यो रोगबाट बच्न सकिन्छ । तर धेरै पाठेघरको मुखको क्यान्सरका बिरामीहरु अन्तिम अवस्थामा मात्र अस्पताल उपचारका लागि आउने डा. बरालले बताए ।
ह्युमन प्यापिलोमा भाइरसका कारण क्यान्सर महिलामा लाग्ने गरेको चिकित्सकहरु बताउँछन् । त्यसैगरी अमेरिकन क्यान्सर सोसाइटीका अनुसार सबै महिलाको स्क्रिनिङ २१ वर्षको उमेरमा सुरू गर्नुपर्ने हुन्छ । एचआईभी संक्रमण भएका अंग प्रत्यारोपण गरेका, शरीरको रोगसँग लड्ने क्षमता कम भएको परिस्थितिमा यस्ता स्क्रिनिङ अलि छिटो अर्थात् धेरै गर्नुपर्ने सोसाईटीले जनाएको छ ।
उक्त सोसाइटीकाअनुसार स्क्रिनिङ टेस्टका कारण अमेरिकामा पछिल्लो ३० वर्षमा पाठेघरको मुखको क्यान्सरले हुने मृत्युमा ५० प्रतिशत कमी आएको छ । नेपाल सरकारसँग पाठेघरको मुखको क्यान्सरका कति बिरामी छन् भन्‍ने यकिन तथ्यांक पनि छैन् । आगामी आर्थिक वर्ष २०७६-०७७ को बजेटमा समेत पाठेघरको मुखको क्यान्सरबाट बच्न नि:शुल्क खोप कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले बजेट विनियोजन गरेको जानकारी दिएका छन् ।
विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार कम आय भएका देशहरुमा पाठेघरको मुखको क्यान्सर बढी देखिने गरेको उल्लेख छ ।
पाठेघरको मुखको क्यान्सरका लक्षणहरु :
तौल अस्वाभाविक रूपमा घट्ने वा बढ्ने ।
पेट सुन्निने तथा हावा भरिएजस्तो हुने ।
महिनावारी भइसकेपछि पनि पुन रक्तश्राव हुने ।
तल्लो पेट दुख्ने ।
यौनसम्पर्कको समयमा बढी पीडा हुने ।
पिसाब गर्न पीडा र गाह्रो अनुभव हुने आदि ।
कम उमेरमा विवाह नगर्ने
धेरै बच्चा नजन्माउने ।
एकभन्दा बढी व्यक्तिहरूसँग यौनसम्पर्क नगर्ने ।
गुप्तांगको सरसफाईमा विशेष ध्यान दिने ।
सूर्तीजन्य पदार्थको सेवन नगर्ने ।
गुप्तांगसम्बन्धी रोगहरूको समयमै उपचार गराउने ।
हरेक एक वर्षमा पाठेघरको (प्याप-स्मेयर) परीक्षण गराउनु पर्दछ ।
Posted by DoroNepal.com at 12:45 PM